Siddeed Qodob Oo Laga Fahmay Cajaladdii Muuqaalka Ahayd Ee Soo Bandhigtay Siraha Madaxtooyada DDS - Jigjiga Online
HomeSomalidaSiddeed Qodob Oo Laga Fahmay Cajaladdii Muuqaalka Ahayd Ee Soo Bandhigtay Siraha Madaxtooyada DDS
Jigjiga (JigjigaOnline) – Toddobaadkii ugu dambeeyey waxa Dawladda Deegaanka Soomaalida laga hadal hayey muuqaal daawasho ah oo lagu soo bandhigayey xogo ku saabsan xukuumadda Madaxweyne Mustafe Muxumed Cumar iyo qaab-dhismeedkeeda.
Muuqaalkan oo uu tabinayey wariyaha caanka ah ee Fanuel ayaa waxa uu daaha ka feyday sida ay ku yimaaddaan magacaabista uu madaxweynuhu sameeyo oo intooda badan ka yimaadda magaalada Nairobi oo ah magaaladii uu Madaxweynuhu ku sugnaa sannadihii ugu dambeeyey ka hor intii aan xilka loo dhiibin.
Dadka daawaday muuqaalkan ayaa waxay ka bixiyey aragtiyo iska soo horjeeda, laakiin madaxtooyada ayaa si adag uga gilgilatay, waxaanay ku jawaabtay qoraallo aan si rasmi ah xafiisyada uga soo bixin laakiin dad kale oo iyaga ka tirsan oo adeegsanaya magacyo been abuur ah ay baraha bulshada ku qaybiyeen.
Haddaba, maxay tahay cajaladdan saska ku abuurtay madaxtooyadu?
Wariye Fanuel oo dalka Itoobiya aad looga yaqaano ayaa daadihinaya muuqaalkan oo Youtube-ka iyo baraha bulshadu ku xidhiidhaba lagu baahiyey, waxaana uu ku baxayaa luuqadda Afka Amxaarada, waxaana uu huwan yahay siro culus oo hurdada u diiday Madaxweynaha.
Jigjiga Man oo ka mid ah aqoonyahanka dalka ayaa waxa uu soo koobay waxyaabihii laga fahmay muuqaalkaas;
“1. In Fanuel, weriyaha soo qoray warbixintan ahaa Mustafa saaxiibkii iyo ninkii uu u nisbeeyay in uu ahaa ninkii afgambigii Axmad Shide fashiliyay. Taasoo uu wariyihu bilaabay in uu dabo galo dawlada leh waad na badbaadisay meeshay ka timid.
2- in shirkii dirdhabe ee 6000 Kun ee shacabka ahaa laga been sheegay, laga dhigay ergey, warqad qoray odhanaysa: Mustafaan dooranay. Markaa shacabkaas laga been abuurtay ma wariyaha ayaa diintooda ku gafay, mise kii ka been sheegay?
3- in Qurbe joogtii Addis Ababa ayaa idin diiday oo been cad ah lagu yidhi, deetana banaanka la diray, iyo in siyaasiyiintii gudahana lagu diray qurba joogta, laguna yidhi qurbe-joogtii baa cadhoonaysa hadii aan idin magacowno, sidaas darteed labadiinuna banaanka jooga. ( Taasna markqaati yaashi baaba nool oo la waydiin)
4- Markii labadaa qolabada banaanka la dhigay, In koox diyaarsanayd oo dalka dibadiisa ka timid dawladii laga soo bixiyay. Iyaduna wax qarsoonba maaha.
5- in Faarah JigJiga yimid, siyaasi kenyan yahay ama ahaaba, oo waliba dunida caan ka ah, imaatinkiisa iyo soo noqnoqashada Faarahna Tv deegaanka ayaa laga soo daayaa mar kasta oo taasna lama dafiri karo.
6- in xassan daadhi ka tirsanaan jiray ururka al itixiaad, eegana Islaax ( Tadaamun) la mid yahay- taasna wax qarsoonba maaha, intaas unbuu wariyahuna sheegay.
7- in fahad yaasiin oo ah shaqsi qatar xidhiidh la leh lacagtii uu Mustafe loolanka ku galay ka timid u keenay ( Hada Mustafa ayaa dhowr jeer difaac ka dhigtay isagaoo sheegaya sababta uuna ugu baahnayn inuu lacag dhaco maadaama ay 5-tii Malayna ee cajalada laga sheegayay ay 2 million baaqi wali u sii tahay, sidaas darteed uuna u baahnayn lacag musuqa )— xusuusnaada Faankaas uu saas ugu faano waa xog aan ka helay ilo lagu kalsoon yahay.
8. In Al-Itixaad, gaar ahaan Sheikh Ibrahim inta Poole lagu bilaabay, kadibna si sharaf daro ah banaanka loogu tuuray. Hade, garo’e waa markii la isticmaalay oo laga dan gaadhay. Iyana wax qarsoon maaha.
Bal arimahaasu miyaanay ahayn xog xataa islaanta caanaha gadaa ay ogtahay, iyaga jawaabtoodu waxay noqotay aan “diimeeyno cajalada”
waxaan soo xasuustay sheekadii “marka la qabtaa bay KONGO isku qaadaa”. Waa halkiiye, Hada marka xog dhaba la soo bandhigay oo jawaab cad u baahan ayay diintaa la haystaa qiil ka dhigataa.
Diinta musuqa ogolaatay talow waa diintee?
Qeybta labaad ee qormadayda ka dhugta inshallah.”